Learn ကူးယူပါ2သင်ယူမှုကို eToro တွင်အခမဲ့! မိတ္တူကူးသန်းရောင်းအပေါ် 2022 လမ်းညွှန်
Learn2Trade မှ eToro ကူးယူခြင်းလုပ်ငန်းအစုစုကို - ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုလိုက်နာပါ။ 2022
eToro တွင်ရရှိနိုင်သည့်ကူးယူရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်သည်အပြောင်းအလဲနှင့်မတူပါ။ သင်လုပ်ရန်မှာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ပြီးသင်မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်ထိုင်။ ၀ င်ငွေမျှတသောဝင်ငွေကိုခံစားနိုင်သည်။
If သာ ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်။
ဤအရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် eToro သည်ကုန်သည် ၁၂ သန်းကျော်တို့၏နေအိမ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဂျုံနှင့်အခွံကိုခွဲခြားရန်ခက်ခဲစေသည်။ သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောသတင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည်မကြာသေးမီက eToro Copy Trading ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အမြတ်အစွန်းရသည့်ကာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်ကုန်သည်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုမည်သို့ထင်ဟပ်နိုင်ကြောင်းဆက်လက်လေ့လာပါ။
မှတ်ချက် - ကုန်သွယ်မှုပုံစံအားလုံးသည်အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်အသင်းကိုသင်လိုက်နာခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရှိမည်ဟုအာမမခံပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းတိုင်းရှိသည်။
eToro တွင်ကဲ့သို့သောရာထူးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကူးယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Copy Trading အစုစု ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့ရယူပါ။
eToro တွင်ကူးယူလေ့လာပါ2ကုန်သွယ်ရေး
ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူ CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်အသစ်များ၏ 75% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။
eToro Copy Trading ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Copy Trading အင်္ဂါရပ်သည်အွန်လိုင်းပွဲစား eToro မှကမ်းလှမ်းသောအလွန်လူကြိုက်များသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် eToro ပလက်ဖောင်းကိုသုံးနေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်တစ် ဦး ကို“ ကူးယူ” ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့အစုစုကိုတူတူပါပဲ။
ဥပမာအားဖြင့်, အကယ်၍ ကုန်သည်သည် Apple စတော့ရှယ်ယာများတွင် ၄၀% သောအစုရှယ်ယာများရှိပါက၊ ကုန်သည်အတွက် 40% ရှိပါက ရှေ နှင့် 15% သဘာဝဓာတ်ငွေ့မင်းလိုပဲ ထို့အပြင် - နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်သည်ကုန်သည်ကိုကူးယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော အခြေခံ။
ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ ကုန်သည်တစ် ဦး ရာထူးမှထွက်သွားပါကသင်အလိုရှိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တူညီတဲ့ကုန်သည်ထို့နောက်တစ် ဦး ကထပ်ပြောသည်ဆိုပါက အသစ် သူတို့ရဲ့အစုစုကိုပိုင်ဆိုင်မှု - နောက်တဖန်သင်အလိုရှိသည်။ သီအိုရီအရဆိုရလျှင်သင်သည်အွန်လိုင်းအားတက်ကြွစွာကုန်သွယ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ယင်းအစား၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောမိတ္တူကူးသူသည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ယူရမည်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုစီအတွက်မည်မျှအစုစုမည်မျှမည်မျှခွဲဝေသတ်မှတ်မည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ရောင်းမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လည်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, eToro သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုထားသည် - အပိုထပ်ဆောင်းအခကြေးငွေများမပေးပါ။
eToro Copy Trading ကုန်သွယ်ရေးမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
ကူးယူကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင်ကအတော်လေးရှေ့ကိုသွားသည်။ အခက်ခဲဆုံးကတော့သင့်ကိုတသမတ်တည်းအမြတ်ရစေမယ့်ကုန်သည်ကိုဘယ်လိုရွေးရမယ်ဆိုတာသိခြင်းပဲ။ နောက်ဆုံးတွင်အတိတ်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အနာဂတ်ရလဒ်များ၏သေချာသည့်မီးဘေးညွှန်ကိန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
အဆင့် ၁ - ကူးယူသူတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်ကူးယူရန်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ eToro ပလက်ဖောင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၁၂ သန်းကျော်ရှိသော်လည်း Copy Trader ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုသူများအားလုံးလက်မှတ်မထိုးထားပါ။ ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကုန်သည်တွေကရွေးချယ်စရာတွေရှိနေသေးတယ်၊ ဆိုလိုတာကအိမ်စာလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ကုန်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ eToro ကသင့်အားကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့်မက်ထရစ်အချို့မှာ -
သမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်ရည် eToro Copy Trader ၏ပရိုဖိုင်ကိုသင်နှိပ်သောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထားသည့်နေရာတစ်ခုစီကိုအခြေခံအားဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စင်မြင့်ပေါ်သို့သူတို့ဝင်ရောက်ချိန် မှစ၍ ကုန်သည်သည်မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုသင်ရှင်းလင်းသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတစ်လပြီးတစ်လကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအမှန်တကယ်အသုံးဝင်သည်။
ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပစ္စည်းများ ကုန်သည်သည်ထင်မြင်ယူဆသောကြိုက်နှစ်သက်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုလည်းသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောကုန်သည်များသည်စတော့များနှင့်ကပ်နေသော်လည်းအချို့မှာမူ Forex ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ အချို့သောကုန်သည်များသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများစွာကိုဖုံးလွှမ်းထားသော All of All of Jack များပိုဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - eToro အားထောက်ပံ့ပေးသောအခြေခံနည်းပညာသည်ကူးယူရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်တွင်အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၁ သည်နိမ့်ဆုံးစွန့်စားမှု ၁၀ ​​မှ ၁၀ အထိဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်အဆင်ပြေသည်ဟုခံစားရသောအန္တရာယ်အဆင့်ကိုထင်ဟပ်ပြသည့်ကုန်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်မှုကြာချိန်: eToro ကုန်သည်သည်ရပ်တည်နိုင်သည့်ရက်ပေါင်း (သို့မဟုတ်နာရီ) ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်ကိုလည်းသင့်အားအသိပေးသည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်နှင့်မတူသော်လည်း၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, တချို့ကုန်သည်တွေနေစဉ် တစ်ရက်ကုန်သွယ် or လွှဲကုန်သွယ် ချဉ်းကပ်နည်း၊ အခြားသူများသည်ရေရှည်မဟာဗျူဟာကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ: ယခုသင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်သည်ကိုကူးယူနေသည့် eToro အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကိုလည်းသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကကုန်သည်သည်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ငွေမည်မျှရှိသည်ကိုသင်သိစေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် eToro ရှိအကောင်းဆုံးကူးယူရောင်းဝယ်သူများမှာများသောအားဖြင့်နောက်လိုက်များရှိသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း eToro တွင်ကူးယူရောင်းဝယ်သူကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်မက်ထရစ်များစွာရှိသည်။
အဆင့် ၂ - ရန်ပုံငွေများခွဲဝေချထားပါ
သင်ကြည့်ချင်သော eToro ကော်ပီကုန်သည်ကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်သင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေအချို့ကိုခွဲဝေပေးရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖြစ်ရန်လိုသည်။
ထို့အပြင်၊ သင်ကုန်သည်ကိုသင်ကူးယူလိုခြင်းရှိမရှိကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော အခြေခံ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့သာသောအစုစုကိုကူးယူ ယခု ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်, အဆုံးစွန်သောအဘို့ရွေးချယ်အချက်များသိပ်မရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံးတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်နေသည့်အမှာစာများသည်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမှအကျိုးအမြတ်မယူနိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အမြတ်အစွန်းရစေသောအခွင့်အလမ်းများကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် eToro သည်သင့်ငွေလက်ကျန်မှသက်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းကိုနှုတ်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၏ 'ကူးယူခြင်း' အပိုင်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ရှုပ်ထွေးနေလျှင်၊ ဥပမာကိုကြည့်ပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်မိတ္တူကူးသူကုန်သည်သည်သူတို့၏အစုစုတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါင် ၁၀၀,၀၀၀ ရှိသည်ဟုဆိုပါစို့
ပေါင် ၂၅၀၀၀ သည် IBM စတော့ရှယ်ယာများ (၂၅%) နှင့်ပေါင် ၇၅၀၀၀ ကိုငွေချေးစာချုပ်တွင်ရှိသည် ETF (75%)
သင်£ 1,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏အစုရှယ်ယာပေါင် ၂၅၀ (၂၅%) သည် IBM စတော့ရှယ်ယာများနှင့် ETF တွင်ငွေပေါင် ၇၅၀ (၇၅%) ပါဝင်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းသင်၏အရင်းအနှီးမည်မျှရှိသည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ သင်၏ Copy Trading အစုစုသည်ကုန်သည်၏တန်ဖိုးနှင့်တူသည်ကိုတွက်ချက်လိမ့်မည်။
အဆင့် ၃။ ငွေရှာခြင်း
ငွေရှာရန်နှင့် eToro Copy Trading သည်ထူးခြားသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဗျူဟာနှင့်မတူပါ။ တနည်းအားဖြင့်သင်၏အစုစုသည်သင်ရွေးချယ်သောကုန်သည်၏ကာဗွန်မိတ္တူတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်မှရရှိသောအမြတ်အစွန်း - ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် သင့်ရဲ့ အစုစု။
သင် $ 2,000 ကို Forex ကိုသာအဓိကထားသောမိတ္တူကူးသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ဟုဆိုပါစို့
ကုန်သည်သည် ၎င်းတို့၏အစုစု၏ 1% ကို ခွဲဝေပေးသည်။ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ အမှာစာ - 30x ပမာဏဖြင့် ဝယ်ယူပါ။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာ 20x leverage ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်သည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀ ဆုံးရှုံးမည်ကိုဆိုလိုသည်
ကုန်သည်သည်သူတို့၏ GBP / USD အနေအထားကိုပိတ်လိုက်ပြီး ၀.၅% ရရှိခဲ့သည်။
သင်၏အစုစုသည်ကုန်သွယ်မှုကိုထင်ဟပ်စေသည် - ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဒေါ်လာ ၂၀ ၏ ၀.၅% ကိုလုပ်သည် - ဆိုလိုသည်မှာဒေါ်လာ ၀.၁၀ (ဒေါ်လာရှယ်ယာ ၂၀ မှ ၀.၅%) သာဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ သင်၌သြဇာသက်ရောက်မှု ၁း၃၀ ရှိသည် - ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အမှန်တကယ်ဒေါ်လာ ၃ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
အထက်ပါကိန်းဂဏန်းများသည်အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်း Forex day ကုန်သည်များသည်တစ်နေ့တာအတွင်းရာထူးများစွာနေရာချလေ့ရှိကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သေးငယ်တဲ့ပြန်အလွန်လျင်မြန်စွာတက် add နိုင်ပါတယ်။
Copy Trading မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုယခုသင်သိပြီ ဖြစ်၍ ယခုသင်ခန်းစာ2သည်ကုန်သွယ်ရေးမှဘာကမ်းလှမ်းနိုင်သည်ကိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည်ငွေကြေးနှင့်တက်ကြွစွာပါဝင်သည် ကုန်စည် ၁၅ နှစ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုနေရာတွင်လူသိများသည်။ အခြား ၁၀၀၀ ကျော်အသင်း ၀ င်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကုန်သွယ်ရေးအကြံပြုချက်များကိုအကျိုးရှိစေသည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းသည်အနိုင်ရရှိမှုနှုန်းကို ၇၆% ကျော်အထိပစ်မှတ်ထားသည် - ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင့်များစာရင်းသွင်းမှုများတွင်များပြားလာသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ လေ့လာမှု2ကုန်သွယ်ရေးသည်မကြာသေးမီက eToro Copy Trading ကုန်သွယ်ရေးပရိုဂရမ်တွင်အဓိကကျသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသင်းဝင်များကိုဝင်ငွေမှရရှိရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex၊ ကုန်စည်နှင့် cryptocurrency အချက်ပြမှုများသည်အသုံး ၀ င်သည် - အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီအပေါ်သင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့အပြင်အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေနှင့်အချက်ပြများသည်၎င်းတို့လက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်စွာဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ အလှည့်အနေဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င်အချို့သည်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများလွတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
Que - လေ့လာရန် ၂ ကုန်သွယ်ရေးမိတ္တူကူးယူခြင်းအစုစု!
အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းရှိ ကုန်သည်များ၏ အဝယ်အရောင်းရာထူးများကို ယခုတွင် ထင်ဟပ်ဖော်ပြရန် အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ငါတို့ ကုန်သည်တွေ လာဝယ်ရင် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ - သင်အလိုအတိုင်း။ ငါတို့က ကုန်သည်တွေဆိုရင် ရောင်းတယ်။ AUD / NZD - သင်အလိုအတိုင်းပင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအရဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြအကြံပြုချက်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် 1:3၏စွန့်စားမှု / ဆုအချိုးကိုယူလေ့ရှိသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဆိုလိုတာကငါတို့ရဲ့အရင်းအနှီးရဲ့ ၁% ကိုစွန့်စားပြီး 1% အကျိုးအမြတ်ရအောင်လုပ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့အရောင်းအပေါငျးတို့သအပေါ် stop-loss နှင့်ယူအမြတ်အစွန်းအမိန့်ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သည်။ ထပ်မံ၍ eToro တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူးယူခြင်းဖြင့် - သင်အလိုအလျောက်အမှာစာတစ်ခုချင်းစီကိုသင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
မည်သို့ကူးယူရမည်နည်း။ လေ့လာပါ။2ကုန်သွယ်ရေးအခမဲ့
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအသင်းကို eToro ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ကူးယူနေသည့်အသံကဲ့သို့လား။ ထိုသို့ဖြစ်ပါကယခုစတင်ရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဘောလုံးကိုလှိမ့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအချိတ်အဆက်မှတဆင့် eToro နှင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်သည်သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာသို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည် ဒီမှာ link ကိုနှိပ်ပါ.
ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူ CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်အသစ်များ၏ 75% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။ သင်၏ငွေဆုံးရှုံးမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးစွန့်စားနိုင်မလားစဉ်းစားသင့်သည်။
သင် eToro ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ရောက်သည်နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါ။ ၎င်းတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အချို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
မွတ္စု: သင်၌ eToro တွင်အကောင့်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးအခမဲ့ Copy Trading ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ထံအမြန်အကြောင်းကြားစာပို့ပေးပါ။
သင်၏အသစ်တီထွင်ထားသော eToro အကောင့်သို့ငွေသွင်းရန်သင့်အားတောင်းလိမ့်မည်။ ဒီပွဲစားနှင့်အတူအနည်းဆုံးငွေပမာဏ $ 200 - ငါတို့ Copy Trading ၏အစုစုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံများအတွက်တူညီသောနိမ့်ဆုံးဖြစ်။
eToro တွင်ထောက်ပံ့ထားသောငွေပေးချေမှုစနစ်များတွင် -
ထိပ်တန်းအကြံပေးချက် - ရန်ပုံငွေတွေရောက်ဖို့ရက်အနည်းငယ်စောင့်ရမယ်။ အခြားငွေပေးချေမှုစနစ်များအားလုံးကိုချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ eToro Username ကိုလက်ခံရန် Screenshot ကိုပေးပို့ပါ
သငျသညျ $ 200 နိမ့်ဆုံးသိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီ
သတိပြုပါ၊ သင်သည်အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအားပေးပို့ခြင်းဖြင့်အရေးကြီးသည့်အချက်အလက်များကိုဖော်ထုတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် eToro ရှိ usernames အားလုံးသည်အများသုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်အားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှမျှဝေခြင်းမပြုရန်သေချာစေမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏ privacy ကို ၁၀၀% ကာကွယ်ထားသည်။
လိုအပ်သောဖန်သားပြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော eToro အသုံးပြုသူအမည်ကိုဖော်ပြသည့်စာတစ်စောင်ပို့ပေးပါမည်။
4. လေ့လာသင်ယူခြင်း2ကုန်သွယ်ရေးကိုကူးယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ eToro အသုံးပြုသူအမည်ကိုသင်ရရှိပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုသင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် 'Copy' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် pop-up box ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဤနေရာတွင်သင်လိုအပ်သည် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ Copy Trading အစုစုတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ (အနည်းဆုံး $ 200)
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုကူးယူရန်အကွက်ကိုအမှတ်အသားပြုပါ
အထက်ပါအချက်များကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစုစုကိုချက်ချင်းကူးယူပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောရာထူးများကို ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစုစုတွင်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
မှတ်စု: ကျွန်ုပ်တို့ကို eToro မှတစ်ဆင့် ကူးယူသည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် သင့်ငွေများကို သင်ငွေချေနိုင်သည်။ တကယ်တော့၊ သင်ရာထူးကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို သင့် eToro ငွေသားအကောင့်ထဲကို ထည့်ပြီး ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
eToro သည် စတော့ရှယ်ယာများနှင့် cryptoassets များတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအပြင် ကုန်သွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ CFDs.
CFD များသည်ရှုပ်ထွေးသောလက်နက်ကိရိယာများဖြစ်ပြီး၊ သြဇာကြောင့်ပိုက်ဆံလျင်မြန်စွာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည်ကိုသတိပြုပါ။ 75% လက်လီရောင်းချသူများ၏အကောင့်များသည်ဤပံ့ပိုးသူနှင့် CFD များကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါငွေဆုံးရှုံးသည်။ CFDs များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်နားလည်သည်၊ ငွေများဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသောစွန့်စားမှုအတွက်သင်တတ်နိုင်သလားစဉ်းစားသင့်သည်။
Cryptoassets များသည်မတည်ငြိမ်သောကိရိယာများဖြစ်ပြီးအချိန်တိုအတွင်းကျယ်ပြန့်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်လျော်ပါ။ CFD များမှ လွဲ၍ အခြားကုန်သွယ်ရေး cryptoassets သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောကြောင့် EU စည်းမျဉ်းမူဘောင်မှကြီးကြပ်ခြင်းမရှိပါ။
eToro USA LLC သည် CFD များကိုမတင်ပေးပါ၊ ကိုယ်စားပြုမှုမရှိပါ။ eToro နှင့်ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်သည့်သီးခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်မှပြင်ဆင်ထားသောဤထုတ်ဝေမှု၏တိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံမှုအတွက်တာဝန်ယူမှုမရှိပါ။
အဘယ်အရာကိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ်2ကုန်သွယ်ရေးအာရုံစိုက်?
eToro ရှိအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ cryptocurrency နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အားသာချက်ကိုရယူခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များအဖွဲ့သည်စတော့ရှယ်ယာများကဲ့သို့သောအခြားပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုရယူရန်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
သင်၏ Copy Trading ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Copy Trading ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်မည်သည့်အရာမျှမကောက်ခံပါ။ သင်လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော link မှတဆင့် eToro နှင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်ငွေပမာဏကိုဖော်ပြထားသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ငွေသည် eToro တွင်လုံခြုံပါသလား။
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ eToro သည်တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသောပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၁၃ နှစ်ကျော်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် FCA (ယူကေ)၊ ASIC (သြစတြေးလျ) နှင့် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ် / ဥရောပ) တို့နှင့်လိုင်စင်ရရှိထားသည်။
သင် eToro Copy Trading ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်တွင်မည်မျှကြာခဲ့ပြီလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် eToro Copy Trading ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်တွင် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလကဲ့သို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကုန်သွယ်မှု၌ကျွန်ုပ်တို့သည် ၅.၉၁% ပြန်လာခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ eToro Copy Trading အကောင့်ကိုမည်သို့ငွေကြေးထောက်ပံ့ရမည်နည်း။
eToro သည်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံသည်။ ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ ခရက်ဒစ်ကတ်၊ အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ဘဏ်ဝါယာကြိုးတို့ပါ ၀ င်သည်။ အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်မှာ eToro အကောင့်ရှိပြီးသားဆိုလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
သင်၌ eToro အကောင့်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ Copy Trading ၀ န်ဆောင်မှုကိုရထိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုချပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်မည်သို့ကူးယူရမည်ကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောစွန့်စားမှု / အကျိုးခံစားခွင့်အချိုးအစားကိုလိုက်နာသည်။ ဒါက ၁: ၃ ပါ။ ဆိုလိုတာက ၁% အကျိုးအမြတ်ရဖို့ ၁% အန္တာရာယ်ရှိတယ်။